Tag: Lohasaha Silicon
Saturday, May 17, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny volana aogositra lasa teo aho dia nanoratra momba ny asako vaovao any Patronpath. Naharitra 8 volana ny fanamby tao Patronpath saingy hita hatrany hatrany ilay orinasa. Ny telovolana voalohany dia lehibe kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa ary ny mpanjifanay dia manana fitomboana avo roa heny anatiny amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny marketing sy ny ecommerce. Omaly alina, nandresy ny mari-pankasitrahana Mira ho an'ny Orinasa Gazelle Fampahalalam-baovao Indiana izahay! Ny ampahany tena sarotra amin'ny ezaka ataontsika dia ny fampidirana am-pisakafoanana